परराष्ट्रको चासो निराकरण हुन्छ, एनआरएनए चुनाव रोकिन्न : महासचिव डा. शर्मा
युरोपनेपाली खबर २०७८ भदौ २८ आइतबार, 12-09-2021
युरोप । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएको आसन्न चुनाव कुनैपनि हालतमा नसर्ने बताएका छन् । टिभि सन्डेसँग कुराकानी गर्दै डा शर्माले आफ्नो अनुकुल नतिजा नआउने देखेपछि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर मन्त्रालयमाथि चिठी लेख्न दबाब दिइएको बताए ।
चुनाव रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न दिएको असन्तुष्ट समूहप्रति लक्षित गर्दै डा. शर्माले शक्ति र सत्ताका भरमा मन्त्रालयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । मन्त्रालयले महाधिवेश प्रतिनिधि चयनमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालका लागि चुनाव स्थगन गर्न आग्रह गरेपनि ती समस्या टुंग्याएर चुनाव गरिने बताए ।
मन्त्रालयले आसन्न चुनावलाई प्रभावित पार्न खोजेको र आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएको डा शर्माको भनाइ छ । ‘सदस्य हु“ भनेर आएकै भरमा उजुरी लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत कदम चालेको छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई भदौ २५ मा एक पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संघको चुनावी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको थियो ।
मन्त्रालयको पत्रमा गैरआवासीय संघका तीनजना सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएका उल्लेख छ ।
विवादिन विषयबारे छानबीन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समिति प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महासचिव डा शर्माले वर्तमान कार्यसमितिले विधि, विधान र प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने र कसैलाई चित्त नबुझेको भए विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिए आवश्यक कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिहरुको चयन राष्ट्रिय समन्वय समितिले गर्ने र त्यसैलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सूची प्रकाशन गर्ने डा. शर्माले बताए । अमेरिकालगायत देशमा विधान र प्रक्रियासम्मत रुपमा चुनाव गरी प्रतिनिधि पुनः पठाएको खण्डमा समावेश गर्न सकिने डा। शर्माले बताए ।
अमेरिकामा पहिले २९ जनाको कोटा छुट्याएर बाँकी प्रतिनिधिका लागि मात्र चुनाव गरिएकाले विधानसम्मत नदेखिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुरानो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि छनोट हुनुपर्ने दाबी गरिएको भन्दै शर्माले एनआरएनएका नेता भन्नेहरुले विधान राम्रोसँग पढ्न र पालना गर्न सुझाव दिए ।
एनआरएनए निर्वाचन : यी हुन् डा. केसीका सारथीहरु
टिम डा. बद्री केसीले एशिया क्षेत्रका एनआरएनए प्रतिनिधिसंग अन्तरक्रिया गर्दै
महासचिव डा. शर्माद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक
एनआरएनए महासचिवका उम्मेदवार विनय अधिकारीका यस्ता छन् भावि योजना र प्रतिवद्दता
एनआरएनए अध्यक्षमा रविना थापा र महासचिवमा विनय अधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा
एनआरएनए निर्वाचन: रविनको उम्मेदवारी घोषणा भोली